Xukuumadaha Somaliland Iyo Somalia Oo Ka Hadlay Mawqifka Iyo Natiijada laga Filayo Wada-hadallo Dib Ugu Bilaabmaya | Cadceed newssite
Xukuumadaha Somaliland Iyo Somalia Oo Ka Hadlay Mawqifka Iyo Natiijada laga Filayo Wada-hadallo Dib Ugu Bilaabmaya
13 Jan, 2013 Hargeysa (Cadceed)- Xukuumadaha Somaliland iyo Somalia, ayaa ka hadlay sii ambaqaadkii wada-hadalladii hore ugu bilaabmay labada dawladood, iyada oo dhinac waliba ka natiijada wada-xaajoodka ka rejaynayo midho-dhal ka tarjumaya mawqifkooda.
Wasiirka Arrimaha Debedda Somaliland Dr Maxamed Cabdilaahi Cumar, ayaa sheegay in wada-hadallada u bilaabmay Somalia aanu waxba ka beddeli doonin Mawqifka ay qaateen shacabka Somaliland, isaga oo dawladda Somalia ugu baaqay inay garawsato danyarta mandaqadda geeska Afrika ugu jirta madaxbannaanida Somaliland.
“Hore ayay Dawlada Somaliland u cadaysay mawqufka ay ka tagan tahay arrimaha Soomaaliya waxa weeye Somaliland marnaba xoriyadeeda Ictiraaf doonka ah ma beddelayso. Markaa Somaliland mawqifkeedu wuu cadyahay, Soomaaliyana wuu cadyahay inay garawsato Madax-bannaanida Somaliland oo aan filayo inay Dani ugu jirto iyaga iyo Madaqada Geeska Afrika,” sidaa waxa yidhi Wasiirka Wasaaradda arrimaha debedda Somaliland Dr Maxamed Cabdilaahi Cumar oo shalay warbaahinta ug warramay magaalada Hargeysa.
Dr Maxamed Cabdilaahi Cumar waxa uu dhinaca kale ka hadlay isbeddel ku yimi hannaankii maamul iyo dariiqii la soo marin jiray Deeqaha caalamku ku caawiyo Somaliland, “Markii hore waxa la soo marin jiray Ha’yaddaha gargaarka imikana, waxaanu ku shubnay sanduuq ay maamulayso Somaliland iyo dawlada Ingiriiska. Waxaana lagaga shaqaynayaa baahida Somaliland ka jirta. Ha’yadaha dawladdu iyaga ayaa soo qoranaya baahida, waxaana siinaya Guddi Somaliland ah iyo dalalka bixiyay deeqda markaa sidii hore way ka duwan tahay.”
Dhinaca kale, Raysal-wasaaraha Somalia Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho, ayaa ku dooday inay rejo fiican ka qabaan wada-hadallada labada dhinac oo dhawaan bilaabmi doona.
Mr Saacid waxa uu sheegay in markii hore ay midnimada Somaliland iyo Somaliya ay ka timid dhanka shacabka reer Somaliland, sidaa daraadeedna ay imika uga fadhiyaan midnimadaasi mid la mid ah. “Waxaanu dib u furnay oo dhawaan bilaabmi doona wada-hadaladii nabadeed ee isku kaaya xidhayey Somaliland, waxaanan ku kalsoonahay inay meel san ku dhamaan doonto,” ayuu yidhi, waxaanu intaas ku daray, “Wax badan ayay taariikhdu u haysaa dadka reer Somaliland, midnimadu [Midnimadii fashilantay] waxay ku timid dedaal xooggiisu ka yimid dadka Somaliyeed, gaar ahaan Somaliland. Haddana midkaa (Midnimadii hore) iyo mid ka badan ayaan uga fadhinaa”
Raysal-wasaare Saacid, waxa uu tilmaamay inaanu rabitaankiisa Midnimada uu ku adag yahay, “Anigu kama laalaabto midnimada, siyaasadda aanu qabnaana waxay ku caddahay dastuurka, dadkuna midnimo ayay rabbaan,”ayuu yidhi.